ကျနော်က Eli Mattson ကိုပေးရစေချင်တာ တယောတီးတဲ့ ညီအစ်ကို ၂ ယောက်ကိုလည်းပေးရစေချင်တယ် အမေကိုအိမ်ဝယ်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတို့ စကားလေးကိုသဘောကျလို့ ။ ကျနော် ကဒေါ်လာတစ်သန်းရရင် ပြည်တော်ပြန်မယ် ဘိုးဘွာရိပ်သာဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆေးရုံးအကြီးကြီးတစ်ရုံဖြစ်ဖြစ် ဆောက်ပြီး လှူချင်တယ်.....း)
Oct 6, 2008, 9:30:00 PM
Oct 7, 2008, 1:19:00 AM
ကိုယ်လည်းသုံး..... လိုအပ်တဲ့နေရာ တွေမှာလည်း
လှူတန်းသမှူ့ ပြု မှာဘဲ.....ဥပမာ...
မိုးများတဲ့ နေရာတွေ ထက် မိုးနဲ တဲ့နေရာ က မိုး ကို
ကျွန်တော် ကတော့ အရင်ထဲက ချမ်းသာတဲ့ ဘုန်းကြီး
ကျောင်းထက် ဆင်းရဲတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကို ပိုပြီး
လှူဖြစ်လေ့ ရှိတယ်။.......၀မ်းကိုသာ လို့...
ဘုန်းကြီးကျောင်း အ ပြင် ယခုလက်ရှိမှာ လည်း အလှူရှင်တွေ ကို စောင့်မျှော်နေ တဲ့နေရာတွေ က
Oct 7, 2008, 3:43:00 AM
ဒေါ်လာ ၁ သန်းသာ ခုရလိုက်လို့ကတော့..
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး စပိုင်လူသတ်သမားတွေ ငှားပြီး
လူပြောင်းမှ မူ ပြောင်းမှာလေ.......။
Oct 7, 2008, 6:13:00 AM
ကိုကလိုစေးထူးရေ ကျွန်တော်ကတော့ Queen Emily ကိုရမယ်ထင်တယ် Nuttin' but Strings က performance အရမ်းကောင်းတယ် ဒေါ်လာတသန်းရရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ခံလိုက်ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလို churchလို စာသင်ကျောင်းလိုဟာ မျိုးတွေကို မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ အဆောက်အဦးတွေအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးခြင်တယ်
အမက Nuttin' but Strings ညီအကို နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေပုံကို သိပ်ကြိုက်တာ။ သူတို့ကိုပဲ ရစေချင်ခဲ့တာ။
အင်း..ဒေါ်လာ ၁သန်းရရင်လား။ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်မဲ့ ရမ်ဘိုတယောက် ငှားလိုက်မယ် အဟဲ..။
Oct 7, 2008, 1:58:00 PM
i amafan of Eli, I am so sad for him. Anyway, he has good future with his unique voice.
Oct 8, 2008, 5:35:00 AM